काठमाडौं (पहिचान) भदौ २४ – आत्महत्या गर्नु कायरता हो । पत्रकार भरत भूर्तेलले अनामनगरको कार्यालयमा भनेका कुरा सुनाउने व्यक्ति भेटिए । तर, उनलाई विचरा भन्नेहरु भेटिएनन् । १ बजेको समय दिएर १२ः५० मै निस्केछन् । एक दुई पटक होइन, दिनहुँ भेट्ने र ज्ञान गुणका कुराहरु साटासाट गर्ने अबसरबाट वञ्चित भएको आजको मितिमा आजको नेपाललाई चाहिएको के छ भनेर प्रश्न गर्नै पाइएन…
कसैले आत्महत्याको खतरासूचक लक्षणहरु देखाएमा परिवारजन, साथीभाई, सहककर्मी, नातेदार, छरछिमेक सबैले आत्महत्याको चेतावनीलाई बेवास्ता नगरौं।
आत्महत्या लैंगिक पहिचान अनुसार गणना भएको छ कि छैन ?
यो तथ्याङक आवश्यक छ कि छैन ?
पुरै लेखका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस
२००७ सालदेखि हरेक १० बर्षमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुँदै आएको छ । गणतन्त्र आएकोे पनि एक दशक भयो । अहिले शासन व्यवस्थाप्रति विरोधका स्वर गुञ्जन थालेका छन् । विरोधको स्वर किन चर्को हुन थालेको हो ?
वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रुपमा जनअपेक्षा अनुसार किन काम गर्न सकेन ?
संविधानमा अधिकार त लेखियो तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष चैं कमजोर देखियो । किन दस्तावेजमा लेखिए अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
के व्यवस्था फेरिएपनि राज्यको चरित्र नफेरिएको हो ?
नयाँ व्यवस्था अनुभुत हुनेगरी काम हुन नसक्दा यसले निम्त्याउने दुशपरिणामलाई कसरी आंकलन गर्नुहुन्छ ?
सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
लगायतका प्रश्न कसले कसलाई ….